Madaxweyne Siilaanyo Oo Xadhiga ka Jaray Wershad Casri ah oo soo saaraysa Waraaqaha iyo Buugaagta | Somaliland.Org
Madaxweyne Siilaanyo Oo Xadhiga ka Jaray Wershad Casri ah oo soo saaraysa Waraaqaha iyo Buugaagta
January 5, 2013	Hargeysa (Somaliland.Org)- MadaxweynahaSomaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa maanta xadhiga ka jaray Warshad Buugaagta iyo waraaqaha oo laga hirgeliyay Magaalada Hargaysa.
Waxa xafladii xadhiga lagaga jarayay Madbacadaasi ka qeyb galay Wasiirro, Xildhibaano, Salaadiin iyo ganacsato kala duwan.
Mulkiilaha Warshadan Xaaji Aadan Axmed Diiriye (Aadan Baradho) oo xafladii furitaanka ka hadlay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay ka soo qayb galka madaxweynaha ee munaasabadan.
Ganacsade Aadan Baradho waxa uu sheegay in wershaddan daraasadeeda iyo dhismaheedu ay socdeen muddo afar sanadood ah. xiligaana ay hawsheedu ka soo gudubtay caqabado kala duwan oo ay ugu horayso in aanay jirin qofka hawsha wada cid kale oo caawinaysa.
Mulkiilaha Wershadaasi waxa uu caddeeyey in mashruucan wershadda loogu tallo galay inuu daboolo baahida waraaqaha ee uu dalkan Somaliland u baahan yahay isla markaana loo gudbin doono dalalka dariska, taasi oo soo saari doonta buugaagta ardayda dugsiyada, warqadaha A4-ta ee xafiisyada lagaga shaqeeyo iyo in laga maarmi doono in warqado lagala soo dego dalka dibadiisa taasoo uu ku tilmaamay mid xitaa ka qayb qaadan doonta fayo dhawrka guud ee dalka.
Wasiirka wasaaradda Ganacsiga Somaliland Md. Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo munaasabadaas ka hadlay ayaa sheegay in kobcinta wershaduhu ay fure u tahay kobcinta dhaqaalaha dalka, wasaarad ahaana ay go’aansadeen inay fududeeyaan waxii ku xidhma haday tahay dhanka cashuuraha ama talooyinka.
Md. C/Risaaq Khaliif waxa uu xusay in ganacsatadu ay hormuud ka tahay sidii loo hirgelin lahaa qorshayaasha lagu hiigsanayo sidii dalkani u gaadhi lahaa horumar dhaqaale oo la isku hallayn karo.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo khudbad ka jeediyay xafladaasi ayaa sheegay in dalka Somaliland yahay mid shacab iyo dawladba diyaar u ah inuu tallaabo u qaado dhan kasta oo horumarka lagaga qayb qaadanayo.
Madaxweynaha Somaliland waxuu balan-qaaday in xukuumaddu diyaar u tahay inay mar walba wax la qabato ganacsatada isla markaana aanay jirin wax hagrasho ah si loo dhiirrigeliyo sidii dalku u yeelan lahaa wershado daboola baahiyaha dalka ka jira, shaqooyina looga abuuri lahaa bulshada.
Munaasabbadaasi waxaa kaloo ka qayb galay mas’uuliyiin ay ka mid yahiin Gudoomiyaha Golaha wakiilada JSL ahna Gudoomiyaha Xisbiga wadani Md Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Md Muuse Biixi Cabdi, xildhibaano, ganacsatada Sl qaarkood, gudoomiyaha Rugta ganacsiga Sl Max’ed Shukri Xuluul iyo mas’uuliyiin kale.
Previous PostMaayarka Cusub ee Hargeysa oo Xilkii Kala Wareegay Duqii Hore ee CaasimaddaNext PostHadhwanaag-eey Beenaale markhaatigiisa Ayuu Fogeeyaa	Blog